ओझेलमा सोवा रिग्पा उपचार !
हरेक क्षेत्रमा रैथाने सभ्यता तथा संस्कृतिलाई बिर्संदै जानु नेपाली समाजको विशेषताका रूपमा स्थापित हुँदै छ । हाम्रै हिमाली जडीबुटी तथा मौलिक ज्ञानको सोवा रिग्पा आम्ची उपचार पनि लगभग लोप हुनेक्रममा छ, यो एक उदाहरण हो । आधुनिक चिकित्सा पद्धतिका नाममा मुलुकले बर्सेनि करोडौँ रुपियाँ खर्च गरिरहेको अवस्थामा सोवा रिग्पा आम्चीजस्ता मौलिक तथा कम खर्चिलाका साथै प्रभावकारी उपचार पद्धतिको जगेर्ना गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ । यसै सन्दर्भमा यस्ता उपचार पद्धति तथा अवस्थाबारे कृष्ण अधिकारीको विवरण ।
विश्वव्यापीकरण र आधुनिकीकरणका नाममा आफ्ना मूल्यमान्यता र मौलिकतालाई बिर्सेर अघि बढिरहेको नेपाली समाज अहिले बिस्तारै पुरानै शैली, संस्कृति र परम्परातर्फ फर्किन खोज्दै छ । पश्चिमा उपभोक्तावादीको हावाले हजारौँ वर्षअघिदेखि कायम रहँदै आएको रैथाने संस्कृतिलाई हल्लाइरहेको छ । आधुनिकताको नाममा त्यस्ता वस्तुहरूले अनेक विकृति र विसङ्गति भिœयाएको छ । पश्चिमा समाजको ठीक विपरीत पूर्वीय सभ्यता र संस्कृतिको जगमा हुर्किएको र हाम्रो मौलिक एवम् रैथाने ज्ञान, सीप र जडीबुटीबाट उपचार गरिने यो उपचार पद्धतिले आफैँ पहिचानको जगेर्ना गर्दछ । पुर्खाहरूले दशकौँको अभ्यासबाट सिकेका ज्ञान, अभ्यास र संस्कारको आत्मसात् गर्नुपर्दछ भन्ने चेतनाको दियो सल्किँदै गएको छ । हाम्रो ज्ञानको रहस्य बुझ्ने र त्यसको संरक्षण सम्बद्र्धनका लागि रैथाने ज्ञानको पुनःस्थापना गर्न सकिएमा भावी पुस्ताका लागि अमूल्य चिनो बन्न सक्दछ ।
महात्मा गान्धीले एक प्रसङ्गमा मानिसको सम्पत्ति सुन र चाँदी होइन, स्वास्थ्य हो, भन्नुभएको थियो । नागरिक स्वस्थ भएमात्रै देश समृद्ध हुन सक्दछ भन्ने कुरालाई उहाँको यस भनाइले पनि प्रस्ट गर्दछ । स्वास्थ्यलाई सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको र विभिन्न दातृसंस्थाको सहयोगमा सञ्चालित स्वास्थ्यका परियोजनाहरूको कार्यान्वयनले पनि अझै नेपालका बहुसङ्ख्यक जनता आधारभूत स्वास्थ्य सुविधाबाट वञ्चित रहनुपरेको छ । नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा स्वीकार गरिसकेको सन्दर्भमा जीवनजल खान नपाएर मर्नुपर्ने, चिकित्सकको अभावमा सुत्केरीले अकालमै ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य अहिलेकै सोच र कार्यशैलीबाट सम्भव छैन ।
आफ्नै हावापानी, जडीबुटी र ज्ञानमा आधारित उपचार प्रणालीको विकास र विस्तारमा ध्यान पुग्न नसकेसम्म आमजनताले सस्तो र सुलभ उपचार सेवा पाउन सक्दैनन् । यसका लागि हाम्रै ज्ञान र जडीबुटीबाट गर्न सकिने थुप्रै उपचार विधिहरू छन्, तिनको प्रवद्र्धन र विस्तारको खाँचो पर्दछ । यस्ता विभिन्न उपचार पद्धतिहरूमध्ये रैथाने ज्ञानको एउटा विषय हो– सोवा रिग्पा उपचार पद्धति । यो पद्धतिले प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापनमा जोड दिँदै मानिसको दीर्घस्वास्थ्यको सुनिश्चित गर्न मद्दत पुग्दछ ।
के हो सोवा रिग्पा उपचार पद्धति ?
आधुनिक चिकित्सा कतिपय सर्नेखालका रोगहरूको उपचारमा प्रभावकारी भए पनि नसर्ने किसिमका अधिकांश रोगको उपचारमा यो पद्धति अपेक्षित रूपमा प्रभावित हुन नसकेको कटु यथार्थ हो । यसबाहेक आधुनिक चिकित्सा पद्धतिले रोगीको शरीरमा अन्य किसिमका दुष्प्रभाव पार्ने भएकाले मानिस सोवा रिग्पालगायत अन्य प्राकृतिक उपचारतर्फ आकर्षित भएको देखिन्छ । वनस्पति तथा जडीबुटीमा आधारित यस उपचार पद्धतिमा शारीरिक र मानसिक असन्तुलन र अव्यवस्थालाई व्यवस्थित तथा सुधार गर्ने प्रयास गरिन्छ । आधुनिक उपचारको विकास हुनुअघि मानिस यिनै प्राकृतिक उपचार प्रणालीबाटै आफूलाई निरोगी र दीर्घजीवी राख्न सकेको थियो । आधुनिक चिकित्सा पद्धतिका उपचारक चिकित्सक अर्थात् डाक्टर हुन् भने प्राकृतिक उपचार प्रणालीबाट उपचार गर्नेहरू नै आम्ची हुन् ।
नेपालको एक मौलिक र सदीयौँदेखि प्रचलनमा रहेको सोवा रिग्पा उपचार विधिलाई कुनै भौगोलिक वा खास समुदायमा सीमित नराखी आमसमुदायको साझा उपचार पद्धतिका रूपमा स्थापित गराउन सकिएमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँचलाई विस्तार गर्न सकिन्छ । नेपालमा भौगोलिक सांस्कृतिक, भाषिक, जातीयलगायत हरेक क्षेत्रमा विविधता रहेसँगै उपचार पद्धतिमा पनि विविध मान्यता, विश्वास र अभ्यासहरू रहेका छन् । विश्वका कमै देशमा मात्रै यतिधेरै उपचार पद्धतिहरू प्रचलनमा रहेका छन् । यसलाई उपचारमा बहुलवाद पनि भन्न सकिन्छ ।
आधुनिक चिकित्सा पद्धतिको प्रभाव बढ्दै गए पनि परम्परागत उपचारका ती मान्यता र विश्वासलाई स्वयम् चिकित्सकहरूले पनि पूर्ण रूपमा इन्कार गर्न नसकेका मात्र होइन, अभ्यासमा पनि ल्याएको पाइन्छ । हाम्रोजस्तो बहुभाषिक, बहुजातीय, भौगोलिक विविधता रहेको मुलुकमा प्रचलनमा रहेका यी उपचार पद्धतिहरूको संरक्षण, सम्बद्र्धन र विस्तारबाट देशलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा ‘मेडिकल हब’ का रूपमा विकास गर्न सकिन्छ ।
कहिलेदेखि सोवा रिग्पा ?
नेपालमा सोवा रिग्पा उपचार पद्धतिको विकास हजारौँ वर्ष अगाडिदेखि परम्परागत रूपमा हुँदै आएको हो । तत्कालीन तिब्बती राजा स्रङ चङ गम्पोसँग नेपाली राजकुमारी भृकुटीको विवाह भएपछि भृकुटीसँगै नेपाली आयुर्वेदका वैद्यहरू पनि तिब्बत भ्रमणमा गएको र त्यहीँबाट यो ज्ञानको आदान–प्रदान नेपालमा भएको मानिन्छ । तिब्बती चिकित्सा पाठ्यपुस्तक ‘फैमा ग्युद’ मा यो ज्ञानको उत्पत्तिबारे प्रस्ट प्रमाणहरू पाइन्छन् । सो पुस्तकमा आम्ची परम्परा तिब्बतका आठौँ शताब्दीमा राजा ट्रिसोङ डेत्सेनको पालामा प्रारम्भ भएको र त्यसै समयमा नेपालको हिमालयमा पनि यसको प्रचार–प्रसार भएको हो भन्ने कुरा उल्लेख छ । नेपालका मुस्ताङ र डोल्पा जिल्लाहरू तिब्बतको बोन्पो सभ्यताको ऐतिहासिक अङ्ग भएकाले तिब्बती उपचार पद्धति नेपाल र तिब्बतमा सँगसँगै विस्तार भएका उदाहरणहरू पनि पुस्तकमा समावेश भएका छन् ।
नेपाली समाजमा अकुपन्चर थेरापी, तिब्बेतियन उपचार प्रणाली, आयुर्वेदिक उपचार, युनान झारफुक, तान्त्रिक, आध्यात्मिक उपचार पद्धति प्रचलनमा रहेका छन् । तीमध्ये सोवा रिग्पा उपचार प्रणालीप्रति नेपालका उच्च हिमाली भेगहरूमा अहिले पनि जनविश्वास निकै रहेको छ । कतिपय ठाउँमा त आधुनिक चिकित्सा प्रणालीभन्दा आम्चीबाटै उपचार पनि गराउने गर्दछन् । वर्षौंदेखि अभ्यासमा रहेको सोवा रिग्पा हिमालय क्षेत्रका बासिन्दाको संस्कृति र संस्कारको अभिन्न अङ्ग बनेको छ । नेपालका उच्च हिमाली बस्तीहरूमा अहिले पनि आम्चीकै भरमा स्वास्थ्य सुविधा पुग्ने गरेको छ । आम्चीहरूले स्वास्थोपचारमात्र नगरी बहुमूल्य जडीबुटीको जगेर्ना गरी जैविक विविधताको संरक्षण र प्राचीन सांस्कृतिक मान्यताको सम्बद्र्धनमा पनि उत्तिकै योगदान पु¥याएका छन् ।
उपचार पद्धतिको हस्तान्तरण
नेपालमा सोवा रिग्पासम्बन्धी औपचारिक शिक्षा हासिल गर्ने अवसर नहुँदा बाबुबाजे आमाहजुरआमाले सिकाएको ज्ञानका आधारमा पुस्तौँ पुस्तासम्म हस्तान्तरण हुँदै आएको छ । नेपालमा सोवा रिग्पा उपचार पद्धतिको विकासबारे कुनै स्पष्ट जानकारी पाउन सकिँदैन । कसैले यो ज्ञान भारतबाट नेपालमा विस्तार भएको भन्ने गर्दछन् भने कोही तिब्बतमा विकास भएर नेपाल भित्रिएको तर्क गर्छन् । कसैले यसलाई चिनियाँ उपचार पद्धतिका रूपमा धेरै वर्षअघि विकास भएको बताउँछन् । नेपालकै हिमाली भेगमा परापूर्वकालदेखि नै प्रचलनमा रहँदै आएको तर्क गर्नेहरूको पनि सङ्ख्या निकै छ । नेपालका अधिकांश आम्चीहरूले तिब्बतबाटै ज्ञान सिकेर आएको पाइन्छ । पहिले हिमालय क्षेत्रको पूर्व कञ्चनजङ्घादेखि दार्चुलासम्म आम्चीहरू थिए । नेपालको मनाङ र डोल्पा जिल्लाहरू तिब्बतको बोन्पो सभ्यताको ऐतिहासिक अङ्ग भएकाले तिब्बती उपचार पद्धति नेपाल र तिब्बतमा सगसँगै भित्रिएको हो भन्ने तर्क पनि अर्का थरीको छ ।
देशका उच्च हिमाली क्षेत्रमा बसोवास गर्ने अधिकांश मानिस बौद्ध धर्मावलम्बी हुनुको साथै तिब्बती संस्कृतिबाट बढी प्रभावित रहेकाले सोवा रिग्पालाई उनीहरूले आफ्नै मौलिक उपचार पद्धतिका रूपमा स्वीकार गरेको पाइन्छ । कुनै पनि स्वास्थ्य समस्या परेमा स्थानीय आम्चीहरूकहाँ उपचारका लागि जाने गर्दछन् । यी क्षेत्रका जनताको स्वास्थ्य समस्या समान रहेको पाइन्छ । यी क्षेत्रहरूमा पुग्न जिल्ला सदरमुकामबाट कम्तीमा पाँ÷छ दिनसम्मको पैदल यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । सरकारी स्वास्थ्य सेवाले दुर्गम हिमाली क्षेत्रका जनतालाई आधारभूत आधुनिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न असमर्थ भइरहेका बेला आम्चीहरूले स्थानीय जनतालाई स्वास्थ्य सेवा दिइरहेका छन् । केही वर्षयता राजधानीलगायत अन्य प्रमुख सहरहरूमा पनि आम्ची क्लिनिक सञ्चालनमा रहेका देखिएका छन् ।
यस उपचार पद्धतिमा बिरामीलाई औषधिमात्र नखुवाई, यसलाई व्यक्तिगत, पारिवारिक र सामुदायिक स्वास्थ्यको महŒव र आवश्यकताबारे जानकारी गराइन्छ । आहारविहारमा सन्तुलन राख्ने कुरालाई निकै महŒवसाथ हेरिन्छ । आम्चीहरूले कतिपय बिरामीलाई आफ्नो क्लिनिक वा घरमै केही दिनसम्म राखेर उपचार गराउने गर्दछन् । बिरामीलाई क्लिनिकसम्म ल्याउन असमर्थ भएको अवस्थामा उनीहरूले आफैँ पनि बिरामीको घरमै गई हप्तौँसम्म त्यहीँ बसेर पनि उपचार गराउनुपर्ने हुन्छ । खुट्टा भाँचिएको, गम्भीर चोटपटक लागेको वा अन्य यस्तै अशक्त बिरामीलाई औषधि खुवाउने, विभिन्न जडीबुटी राखेर पट्टी बाँधेर उपचार गराउँछन् ।
विशेषगरी यस पद्धतिमा रोगीको नाडी छामेर, पिसाब तथा जिब्रो र आँखाको परीक्षण गरेर रोग खुट्याइने गरिन्छ । जडीबुटीको प्रयोगबाट रोगीको उपचारका साथै बाह्य उपचार विधिका रूपमा तेल मालिस, जडीबुटीयुक्त जल स्नानलगायतका विधि पनि अपनाइन्छ ।
सोवा रिग्पा उपचार प्रणालीमा केही खास किसिमका रोगहरूको उपचार निकै प्रभावकारी मानिन्छ । खासगरी पुरानो बाथ, कमलपित्त, यौन रोग, पैताला पोल्ने, शरीर झमझमाउने, डर लाग्ने, मुटु हल्लिने, हेपाटाइटिस, निद्रामा बर्बराउने, पुरानो दम खोकी, उच्च रक्तचाप, न्यून रक्तचाप, चिनी रोग, छारेरोग, कलेजो, ग्याष्ट्रिक, महिनावारीमा गडबडी, पिनास, नशासम्बन्धी रोग, प्यारालाइसिस, युरिक एसिड, अनिन्द्रा, माइग्रेन हेडेक, टन्सिल, थाइराइड, किड्नीको पत्थरी, पित्तको पत्थरी, पिसाब थैलीको पत्थरी, हर्निया, कोलस्ट्रोल, भित्री ज्वरो, मासु फुर्फुराउने, मर्केको, स्तनको अल्सर, क्यान्सर आदि रोगहरूको उपचार हुने गर्दछ ।
जगेर्ना कसरी ?
नेपालकै भनौँ वा हिमाली क्षेत्रको मौलिक उपचार पद्धति सोवा रिग्पाको मौलिकतालाई जगेर्ना गर्नु जरुरी देखिन्छ । सबै कुरामा पश्चिमाहरूको हावा लाग्न थालेका हामीले पूर्वीय उपचार पद्धतिको आयुर्वेद, सोवा रिग्पालगायतका ओझेलमा परेका मौलिक उपचार पद्धतिलाई पनि प्रश्रय दिन सम्बन्धित सरकारी निकायको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ । मानव स्वास्थ्य उपचारकै लागि बर्सेनि करोडाँैै रुपियाँ बिदेसिने अवस्थाबाट मुक्ति पाउन पनि यस्ता पद्धतिको विस्तार जरुरी छ । जानकारहरूका अनुसार पहिले–पहिले हिमाली जिल्लाहरूका प्रत्येक गाउँ–गाउँमा एक–एकजना आम्ची हुने गर्दथ्यो र स्वास्थोपचार सहज थियो । तर, अहिले यो अवस्थामा परिवर्तन आइसकेको छ र गाउँमा अहिले न पर्याप्त आम्ची छन्, न आधुनिक स्वास्थ्यका जानकार डाक्टर नै । त्यसैले पनि होला आफ्नो पुर्खाले आर्जेको ज्ञान जोगाउन सरकारसँग आवाज आम्चीहरूले उठाउन थालेकामात्र होइनन्, आफूहरूलाई पनि आधुनिक र आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणालीसरह मान्यता दिलाउनका लागि गुहार मागिरहेका छन् । जुन जायज एवम् सान्दर्भिक छ । सम्भवतः यही आवाजको सुनुवाइ नै होला । लुम्बिनी विश्वविद्यालयले सन् २०१६ देखि सोवा रिग्पा आम्ची उपचार विधिमा स्नातक तहको अध्ययन सञ्चालनमा ल्याएको छ । यस्ता औपचारिक अध्ययनको क्षेत्रलाई अझै विस्तार गरिनु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ ।